Spray Drift Unavoidable, But There Are Ways To Mitigate It – Potatoes News
Spray drift isingadzivisike, asi pane nzira dzekudzora
Zvingave ivhu-rakaiswa mafomu pakudyara kana postemergence kunyorera, spray drift inoramba iri nyaya inonetsekana kune varimi vemiriwo.
“Drift inyaya inoshushikana mupfungwa. Hapana munhu anoda kukukurwa; hapana munhu anoda kufurirwa, ”akadaro Jason Deveau, nyanzvi yekushandisa tekinoroji mune Yekurima Yekusimudzira Bazi reOntario Bazi rezvekurima, Chikafu uye Zvekumaruwa. Deveau akataura pamusoro pfapfaidzo kukukurwa kune ichangoburwa yeGreat Lakes Fruit, Muriwo, uye Farm Market EXPO, yakaitwa munenge muna 2020.
Yese pfapfaidzo yekushandisa yekudonha inosvika kune imwe nhanho uye hapana imwe, yakanakisa mhinduro. "Drift ichaitika," akadaro Deveau, "asi pane zvakateedzana zviitiko zvaunogona kuita kudzikisa njodzi."
Kudzidzisa anoshanda, kutarisa mamiriro ekunze, kushandisa zvishandiso nemazvo uye nekuziva zviri padyo, nzvimbo dzinotetepa zvese zvakakosha, asi kugadzirisa kutsauka kunotanga nekunzwisisa mhezi nemhedzisiro yadzo padonhwe size. Mhando dzese dzinoburitsa huwandu hwedonhwe hukuru pane chero kumanikidza kumwe.
"Pombi yakakora ichiri kuburitsa madonhwe madiki," akadaro Deveau. Kunyangwe iwo mabhureki akadzika ekudhiraira anokurudzirwa zvigadzirwa zvisingachinji, senge dicamba, zvinogadzira madonhwe mashoma.
Iyo vhoriyamu vhoriyamu inogadzirwa nemuromo uye yakarongedzwa nemadonhwe masize kubva kudiki kusvika kune yakakura yaizogadzira yakasarudzika, bhero-rakaumbwa curve Mazhinji epfapfaidzo kamwene inoburitsa inowira mukati mehukuru hwedonhwe rinotsanangurwa nehukuru hwepakati hwepakati. Iyi ndiyo yepakati pebhero rakaumbwa bhero. Iko kune kushoma vhoriyamu vhoriyamu yakasungirirwa mune diki uye madonhwe akakurisa, ndosaka runyoro ruchipera pamagumo ese.
Nekudaro, hukama huri pakati pekupfapfaidza vhoriyamu, saizi yemadonhwe uye huwandu hwemadonhwe hwakanyanyisa. Kunyangwe paine vhoriyamu shoma kwazvo yakasungirirwa mumadonhwe madiki, ivo vanodarika akakura madonhwe. Kubatsira varimi kufamba nezvose izvi, iyo American Society yeAgriculture neBiological Injiniya yakagadzira protocol inofanidza mabhureki kune anozivikanwa mwero, iyo inovabvumidza kuverengerwa kubva Zvakanyanya Fine kusvika ku Ultra Coarse.
Ruzivo urwu runogona kushandiswa kufanofungidzira kugona kwekupfapfaidza, uye kugona kwespray yekupa kufukidzwa kwakaringana. Mamwe mavara emishonga inouraya zvipembenene anotsanangudza yakapihwa mhando yemhando yekuderedza mikana yekukwira. Kana pasina nhungamiro, varimi vanofanirwa kushandisa kamhepo yakaomesesa yavanogona iyo ichiri kupa kufukidzwa kwakakwana.
"Kufamba kwemadonhwe hakutarisike nemadonhwe madiki, uye anogona kutetereka," akadaro Deveau.
Zvigadzirwa zvisina kugadzikana senge dicamba idambudziko rakakosha nekuti dzinogona kupfumisa nguva refu mushure mekushandisa, zvinoenderana nemamiriro ekunze. Mazuva anopisa ane hunyoro hwakaderera mhanyisa kuchinjika kuita mhute. Kana iko kutendeuka kuchiitika mukati mekupisa kwetembiricha, iwo mweya unokwanisa kuunganidzwa pasi peiyo inversion dura usati wafamba madaro marefu munzira dzisingatarisirwe.
Kupfapfaidza mumamiriro ekunze anotonhorera kana pamvura ine hunyoro kana makore ane mazano akanaka ekugadzirisa dambudziko sezvo vaporization ichinonoka mune aya mamiriro. Kuona fungidziro yekufungidzira kweiyo yakajeka, yakadzikama, inotonhorera manheru anobatsira mukusimudzira kwekupisa inversions kwakakoshawo. Kusarudza iyo chaiyo nguva yezuva yekupfira kunogona kunetsa.
Kupfapfaidza mukati mezuva kunogona kureva kupuruzira kana kuchipisa uye pakaoma, izvo zvinowedzera kupisa kwemhepo. Iko kune zvakare kunetsekana kwemhedzisiro yemushonga wezvipembenene pane mapollinator. Kupfapfaidza husiku kunoreva kumwaya kana kwadzikama, asi ipapo pane mukana wekupisa kupisa, uko kunogona kutakura hutsi hwemakiromita.
Wese munhu anoda kupedza kupuruzira nekukurumidza, asi ingoshandisa mafambiro ekufamba ayo achiri kubvumidza iyo boom yekupuruzira kuti igare yakaderera.
"Iyo inokurumidza kumhanya, iyo inowedzera boom, uye zvakanyanya iyo pfapfaidzo inogona kukukurwa," akadaro Deveau. “Kutyaira nekumhanya haisi iyo nzira yekumhanyisa basa. Kusanganisa kusanganisa uye kurodha ndiyo nzira yekumhanyisa kumwaya. ” Adjuvants anogona kuvandudza kufukidza uye kudzikisa kudzika, asi zvakare zvinogona kukonzera kukuvara kwezvirimwa mune isingasviki mamiriro akanaka. Kuenderana kunogara kuri nyaya, futi. Edza chipfapfaidzo chako uchimwaya pamapepa asinganetsi mvura kuti utore mufananidzo wefafitera rako. "Pepa racho rakachipa uye rinopa mhinduro nekukurumidza," akadaro Deveau.
Rumwe ruzivo nezve kudzora kupuruzira drift kunogona kuwanikwa pa
prayer101.com. Saiti iyi isosi isingabatsiri inochengetwa muCanada naDeveau nevamwe vanyanzvi vetekinoroji. "Kune nzira dzakawanda dzekuuraya mishonga yezvipembenene kwatisingadi," akadaro Deveau, asi pane nzira dzakanaka dzekumwaya mishonga yekurima kuti kuderedze njodzi.
- Dean Peterson, Vekurima Varimi Nhau (VGN) munyori. VGN ibhuku rehanzvadzi reSpudman magazini.
/ midziyo-mumunda /
Tags: mapiritsi emashizhaMwaya driftTsvina tekinoroji
Sora nemishonga yesora kana mbatatisi ichikura
Potato chirimwa kutenderera: 1: 3 kana 1: 4 kana kupfuura
UK: 'Blight kutonga kwanhasi uye mangwana'
Kuita kwevhu uye mbatatisi ganda zvirwere
Misiyano muruzivo inotadzisa varimi kubva mukudzora kushandiswa kwezvirimwa zvinodzivirira goho
Primeur mbatatisi kubva kuAndalusia inotora kubva kumatatata ekuchengetedza
1 mwedzi kare
HZPC: mbeu yembatatisi iri manheru ekutanga